ဖိုက်ဘာမှန်သံဘောင်၏အားသာချက်များ - အဘယ်ကြောင့်ပိုကောင်းတဲ့သံမဏိအားဖြည့်ခြင်းထက်ဖန်အားဖြည့်ပလပ်စတစ်ဘားကိုအသုံးပြုသည်
အဘယ်ကြောင့် shoose ဖိုက်ဘာမှန်သံဘောင် & mesh?
အနိမ့်အလေးခြိနျ။ သငျသညျအစှမျးသတ်တိဆုံးရှုံးမရှိဘဲအခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ပုံ၏အလုံးစုံအလေးချိန်နှင့်ဝန်လျော့နည်းစေသည့်သံမဏိတဦးတည်း, ထက် 8 ကြိမ်ပိုမိုပေါ့ပါးသောအရာတစ်ဦးပေါင်းစပ်သံဘောင်, get ။
အမြင့်ဆန့အစှမျးသတ်တိ။ သငျသညျအားဖြည့်ဘို့ခိုင်ခံ့ပစ္စည်း, သံမဏိအားဖြည့်များ၏ထက်3ကြိမ်ပိုမိုမြင့်မားသောအရာ၏ဆန့အစှမျးသတ်တိကိုသုံးပါ။
50% အထိသိမ်းဆည်းပါ။ သင်အချင်းမှဖိုက်ဘာမှန်အချင်းရန်သတ္တုပြောင်းလဲသွားလျှင်ပင်, ထိုခန့်မှန်းချက်သိသိသာသာလျှော့ချပေးပါတယ်။ ထိုအအကောင့်ထဲသို့အားဖြည့်ထားတဲ့အညီအမျှအားကောင်းတဲ့အစားထိုးတာ, 50% အထိငွေစု။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်% 90 အထိသိမ်းဆည်းပါ။ သငျသညျကြောင့်သူ့ရဲ့အလင်းအလေးချိန်နှင့်အသေးစားအသံအတိုးအကျယ်မှပေးပို့အတွက်သိမ်းဆည်းပါ။ 3000 linear မီတာတစ်ဦးအလတ်စားအိမ်၏တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါအခြေခံအုတ်မြစ်အားဖြည့်များအတွက်လိုအပ်သောအသံအတိုးအကျယ် - ကားတစ်စီး၏ပင်စည်ထဲသို့ကိုက်ညီ။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အတိုင်းအတာ - လိုအပ်တဲ့အရှည်၏အရက်ဆိုင် အားဖြည့်သည့်အခါသငျသညျ, သတ္တုချောင်းတွေ pruning များအတွက် overpay ကြဘူးဒါကြောင့်စုပေါငျး armature ၏အရှည် 50 နှင့် 100 မီတာကွိုင်ဖန်ဆင်းသည်ကိုသင်လိုအပ်တဲ့အရှည်၏ bar ကိုပယ်ဖြတ်ခြင်းနှင့် 11 မီတာသံလုံး join ကြပါဘူး။ အဆိုပါအားဖြည့် frame ရဲ့အနည်းဆုံးရမှတ်အတူတကွသတ္တုချောင်း၏ဆက်သွယ်မှုများမှာ
စွမ်းအင်အသုံး။ သငျသညျထိုအဆောက်အဦး၏စီမံခန့်ခွဲမှုကာလအတွင်းကပင်ကယ်တင်ဆက်လက်ဒါဖိုက်ဘာမှန်တွေနဲ့အားဖြည့်အဆောက်အဦးမှာအပူ၏ကုန်ကျစရိတ်, အမျှ, သံမဏိအားဖြည့်ထက်နိမ့်သည်။
Longlife ။ သငျသညျနှစျပေါငျးမြားစှာအဘို့တည်ဆောက်! (သံမဏိ Analogues မတူဘဲအတွက်) ကွန်ကရစ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖိုက်ဘာမှန်အားဖြည့်များ၏ဘဝဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများအားဖြည့်၏မြင့်ဓာတုနှင့်ချေးခုခံ၏ 100 နှစ်ပေါင်းထက်ပိုပါတယ်။
ရေဒီယိုင့်လင်းမြင်သာခြင်းနှင့် dielectric ဂုဏ်သတ္တိများ။ သငျသညျလျှပ်စစ်မီးလုပ်ဆောင်သွားရန်နှင့်ဒါကြောင့်သင်ထားတဲ့ရေဒီယိုင့်လင်းမြင်သာအတွက်တိုးခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်သံလိုက်လယ်ကွင်းများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုလျှော့ချရပါဘူးတဲ့ dielectric တစ်ဦးထံမှသံချပ်ကာ frame ကိုအသုံးပြုပါ။
ကွန်ကရစ်၌ရှိသကဲ့သို့တိုးချဲ့၏မြှောက်ဖော်ကိန်း။ အဲဒီမှာ (သတ္တုနဲ့မတူပဲ) သိသိအပူချိန်အပြောင်းအလဲများမှကွန်ကရစ်များနှင့်ပေါင်းစပ်အားဖြည့်များ၏တုံ့ပြန်မှုမရှိမညီမမျှဖြစ်တယ်, ဒါသင်ကွန်ကရစ်ဖွဲ့စည်းပုံ၏အက်ကြောင်းနှင့်ပြည်တွင်းဖိစီးရှောင်ကြဉ်ပါ။
လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခ။ သငျသညျ tools တွေကိုတစ်ဦးအနည်းငယ်မျှသာအစုံရှိပြီးတပ်ဖွဲ့တွေဟာ viscous အားဖြည့်နှင့်အတူကိုင်တွယ်နိုင်သူ .A အလုပ်သမားဖြတ်တောက်နှင့် mounting ၏ဖြစ်စဉ်ကိုရိုးရှင်း။
အနိမ့်အပူစီးကူး။ သင် "အအေးတံတားများ" မရှိဘဲအဆောက်အဦတည်ဆောက်နိုင်အောင်ဖိုက်ဘာမှန်အားဖြည့်, (သံမဏိနဲ့မတူပဲ) အပူလုပ်ဆောင်သွားရန်မထားဘူး။ အပူဆုံးရှုံးမှုနှင့်နံရံ၏ခဲ, ကြမ်းပြင်များနှင့်အမြစ်ကို၏ပြဿနာအေးသောရာသီဥတုနှင့်အတူတိုင်းပြည်များအတွက်အထူးသဖြင့်အရေးပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။
Frost ကခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သင်ပင်ပြင်းထန်နှင်းခဲ၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများဆုံးရှုံးမမြင့်မားတဲ့နည်းပညာပစ္စည်းကိုဝယ်ကြလော့။ အပူချိန်ဖိုက်ဘာမှန်အားဖြည့်များ၏တံခါးခုံများနှင့်စစ်ဆင်ရေး mesh -70 С ~ + 200 С°°ဖြစ်ပါတယ်။
Kompozit 21 LLC © 2020 ရွာေဖြလမ္းညႊန္